Talaado 3 August 2021
Guddoomiye Cirro oo ka hadlay doorashadii Kismaayo
Doorashada Xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka billaabatay magaalada Kismaayo ee Xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka Jubaland.
Muxuu Faysal Rooble ka yiri hannaanka doorashada Soomaaliya?
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujinayo in lasoo afjaro khilaafka hareeyey arrimaha doorashada Somalia, iyadoo dhinaca kale u arka in Ra'isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uusan qabsan wakhti ku filan ee uu ku hirgaliyo doorashada.
Roobe oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu madaxda maamul goboleedyada ku marti-qaadayo inay kasoo qaybgalaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho 27-ka bishan June.
Qoor Qoor oo magacaabay xubnaha guddiga doorashada
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa maanta oo Khamiis ah soo gudbiyey liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada Soomaaliya ee laga sugayay.
Galmudug oo la filayo in ay maanta soo dhameystirto xubnaha guddiga doorashada
Masuuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ugu danbeyn maanta oo Khamiis ah ay soo gudbin doonaan liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada Soomaaliya oo maalmahaan laga sugayay.
Rooble oo magacaabay guddi farsamo oo ka caawin doona doorashada
Ra'isul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi farsamo, kaas oo xaafiiska Ra'isul Wasaaraha ka taageeri doona hannaanka doorashada dalka, ay lagu sheegay wareegtada magacaabista guddigan.
Guddi uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u magacaabay inay soo eegaan cabashooyinka laga soo gudbiyey xubno ka mid ah guddiyada doorashada heer gobol iyo federal ayaa shaaciyey liis ka kooban67 xubnood oo ay sheegen in casbaho laga soo gudbiyey.
Musharaxiinta oo Rooble u gudbiyey magacyada xubno cabasho laga qabo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta qaabilay xubno ka tirsan Golaha Midowga Musharrixiinta maalmo kadib markii heshiiiska laga gaaray doorashada.
Ra'iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi cusub
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xusseen Rooble ayaa maanta magacaabay guddi heer wasiiro ah oo baaritaano ku samaynaya casbahada laga qabay xubno ka mid ah guddiga doorashada Somaaliya ee heer federal ah.
Heshiiska doorashada Soomaaliya oo abuuray rajo maal-gashi
Khilaafaadkii siyaasadeed ee xalka laga gaaray ayaa rajo badan geliyay ganacsatada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaas oo uu horay u soo wajahay walaac xooggan markii uu is-mariwaagu jiray.
Beesha caalamka oo baaq cusub u dirtay madaxda Soomaalida
Saaxiibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa sheegay in soo dhoweynayaan shirweynaha Dowladda Federaaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee maanta kusoo idlaaday magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu saxiixay heshiis hoggaaminaya in dalka doorasho looga qabto 60 maalmood gudahood.